Khilaafkii ka Dhashay Dhulkii Soomaalida ee la kala Qaybsaday | Voice Of Somalia
Markii dhulka Soomaalida la kala qaybsaday ka dib, ayaa haddana waxa sii batay muran iyo khilaafkii u dhexeeyey waddamadaas oo la isku maan dhaafsanaa sugnaanta xuduudka dhulka la kala qaybsaday. Haddaba si khilaafkaas loo soo afjaro ayaa sanadkii 1891 Ingiriiska iyo Talyaaniga heshiis (Anglo-Italian) kala saxeexdeen, kaas oo ay ku qeexeen xuduudkii u dhexeeyey dhulkii Soomaalida (Afrikada Bari) iyo dhulkii Somaalida ee Talyaaniga ku hoos jirtey.
Isla sanadkaasna xabashida oo dhul balaadhsiga dhinaceeda uga jirtey ayaa Biyo Qaboobe xarun ciidan ka samaysatay. Arrintaasina waxa ay aad uga xanaajisay xukuumadii Ingiriiska, maadaama Biyo Qaboobe xuduudka dhinaca Ingiriisku sheegto kaga taaley. Talyaaniga iyo Abasiiniyana heshiis is-nabad gelin ah ayaa ka dhexeeyey, Talyaanigu wuxuu Ingiriiska u sheegay inaanu wax wada hadal ah la yeelan karin ilaa uu isaga (Talyaaniga) sii maro. Arrintu si kastaba ha ahaatee, Ingiriisku wuu ku balan furay dadkii Soomaalida ahaa ee dhulkaas deganaa ee uu u balan qaaday inuu quwadaha shisheeye ka damaana qaadi doono. Inkasta oo madaxda Ingiriisku mar isla soo qaadeen in dadka Soomaalida la hubeeyo si ay cadowgooda isaga difaacaan, haddana waxa ay go’aan (Ingiriisku) ku gaadheen in ay Soomaalida xaalkay ku sugan tahay u dhaafaan.
Damaaciga Xabashida iyo in ay dhul-balaarsato kuma ekayn dhulka Ingiriisku gacanta ku hayey ee waxa kale oo ay duulimaad isdaba joog ah mar walba ku qaadi jireen dhulkii Soomaalida ee Talyaanigu xoogga ku haystay. Bilowgii sanadkii 1893 Xabashidu waxa ay ku duushay magaalada Luuq, taasina waxa ay odayaashii magaalada ku kaliftay in ay qaylo dhaan u dirsadaan Talyaanigii Xeebaha banaadir deganaa, hase ahaatee ciidamadii Talyaanigu waxa ay Luuq soo gaadheen laba (2) sano ka dib (1895). Inkasta oo Talyaanigu Xabashida Luuq xoog uga saaray, duulaankii Xabashidu halkaas kuma ekaan ee sannad ka dib (1896) ayey mar kale Luuq dib ugu soo duuleen, halkaas oo mar kale lagu jibiyey. Dagaalada isdaba joogga ah ee Xabashida iyo taageera la’aanta Talyaanigu waxa ay odayaashii magaalada Luuq markii dambe ku kaliftay in ay caawimaad weydiistaan Suldaankii Zansibaar. Suldaankiina wuxuu siiyey Buntukh (Muzzle-Loader) aad u weyn kaas oo in muddo ah hakiyey weeraradii Xabashida.
Isla sannadkaas (1896) shirkaddii Filonardi ee maamulka Talyaaniga Soomaalida u haysay, ayaa dhaqaalaheedii aad u xumaaday, taasina waxa ay ku kaliftay in ay hawlaheedii ay Soomaaliya ka waday soo gebogebayso. Dhammaadkii 1896 shirkadaasi waxa ay lahayd lix xarumood oo kale marka Cadale laga reebo, Waxaana ka mid ahaa; Giumbo, Warshiikh, Baraawe, Marka, Muqdisho iyo Luuq. Isla markii shirkadii Filonardi kacdayna waxaa ku xigay dagaalkii Talyaanigu Xabashida la galay, ka dib markii Talyaaniga la jebsheyna wuxuu go’aansaday inuu Eritrea difaacdo Xeebaha Banaadirna u soo diro Maraakiib dagaal si uu dhulka Soomaaliya u difaacdo haddii Xabashidu isku daydo in ay qabsato.
Isla mudadaas waxaa sii batay doodii Xabashida iyo Ingiriiska u dhexaysay ee ku saabsanayd dhulkii “British Somaliland” ee ay isku haysteen, aakhirkiina waxa ay labada dhinac go’aan ku gaadheen in ay arrinta u dhaafaan Mr. Rennell Rodd oo ahaa Xoghayaha 1aad ee Xafiiskii Ingiriiska ee Qaahira iyo Ras Mokannen oo Menelik Ina-Adeerkii ahaa, si ay xal u raadiyaan, waxa ayna ku kulmeen magaalada Harar.
Haddaba iyadoo gorgortanka ay galeen uu ahaa mid aan sahlanayn aakhirkii waxa ay gaadheen heshiis. Ingiriisku wuxuu aqbalay inuu Xabashida u dhaafo ilaa 67,000 isku wareeg ah oo dhulka Hawd ka tirsan, Xabashiduna waxa ay oggolaatay in Ingiriisku lahaado Hargeysa iyo nawaaxigeeda oo markii hore Boqor Menelik sheeganaayey in ay dhulkiisa ka tirsan tahay.
Waxaa heshiiskaas ka sokoow su’aali ka taagnayd aayaha dhulka Hawd ee soo hadhay ee aan Xabashida lagu wareejin maamulka Ingiriiskana aan toos u hoos imaanayn waqtigaas. Waxaase iska caddayd in Xabashidu dhulkaas mar aan dheerayn qabsan doonto, Ingiriiskuna aanu lahayn awood uu ku ilaaliyo xornimada dadkii Soomaalida ahaa ee uu horey magan gelintooda u balan qaaday, danina aanay Ingiriiska ka hayn in ay Soomaalida hubeeyaan si ay dhulkooda u difaacdaan, taas oo caddaysay munaafaqnimada Xukuumadda Ingiriiska iyo daacad darada ay shacbiga Soomaalida kula dhaqmaysey.
Taariikhdu markii ay ahayd 26 Oktboobar 1896 Talyaaniga iyo Xabashida ayaa heshiis nabadeed kala saxeexday, ka dib markii Talyaaniga dhawr jeer lagu jebiyey dagaalkii Adowa. Heshiiskaas Talyaanigu wuxuu Xabashida ugu aqoonsaday in ay tahay wadan madax banaan oo aanu (Talyaanigu) dib u soo fara gelin doonin. Ka dib markii Talyaaanigu dhulkii Xabashida ka tanaasulayna waxa ay Xabashidii bilawday in ay dhulkii Soomaalida isku sii fidiso (balaadhiso).
Horaantii sannadkii 1897 waxa ay Xabashidu heshiisyo kala duwan la gashay Faransiiska iyo Ingiriisk, heshiisyadaas oo qeexayey xuduudyada dhulalka Soomaalida ee ay kala haysteen.